The Hole in the Ground (2019) | MM Movie Store
ဒီတဈခါတော့ horror ကားတှသေဘောကတြဲ့ ပရိတျသတျတှေ အတှကျ 2019 ထှကျ ကားသဈတဈကားကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ.. ဆရာဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျဟာ ခငျပှနျးသညျရဲ့နှိပျစကျမှုကွောငျ့ လူမမယျသားငယျခရဈကို လကျဆှဲပွီး တဈနယျတဈကြေးကိုထှကျပွေးလာခဲ့တဲ့တယျ…
ပွောငျးလာပွီးသိပျမကွာခငျမှာပဲ သူမအတှကျ အရမျးထိတျလနျ့စရာ တဈခုထပျကွုံရပွနျတယျ…အဲ့ဒါကတော့ အိမျနီးခငျြး စိတျမနှံ့သူအဖှားကွီးရဲ့ ကွောကျရှံဖှယျနောကျခံဇတျလမျးတဈပုဒျကို သူမသိလိုကျရတယျ…သူမ အဲ့ဒီအဖှားကွီးနဲ့ ထိတျတိုကျမတှခေ့ငျြပမေယျ့လညျး တှခေဲ့ရသလို သားငယျကလညျး တနတေ့ဈခွားအမူအကငျြ့တှထေူးခွားလာတယျ…. ..
အဖှားကွီးက ဘာကွောငျ့ အရမျးကွောကျစရာကောငျးတာလဲ….သူ့သားလေးကလညျး ဘယျလိုတှပွေောငျးလဲလာတာလဲ….horror ကားကွိုကျသူတှေ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦးဗြို့
ဒီတစ်ခါတော့ horror ကားတွေသဘောကျတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် 2019 ထွက် ကားသစ်တစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဆရာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့နှိပ်စက်မှုကြောင့် လူမမယ်သားငယ်ခရစ်ကို လက်ဆွဲပြီး တစ်နယ်တစ်ကျေးကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တဲ့တယ်…
ပြောင်းလာပြီးသိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူမအတွက် အရမ်းထိတ်လန့်စရာ တစ်ခုထပ်ကြုံရပြန်တယ်…အဲ့ဒါကတော့ အိမ်နီးချင်း စိတ်မနှံ့သူအဖွားကြီးရဲ့ ကြောက်ရွံဖွယ်နောက်ခံဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို သူမသိလိုက်ရတယ်…သူမ အဲ့ဒီအဖွားကြီးနဲ့ ထိတ်တိုက်မတွေ့ချင်ပေမယ့်လည်း တွေ့ခဲ့ရသလို သားငယ်ကလည်း တနေ့တစ်ခြားအမူအကျင့်တွေထူးခြားလာတယ်…. ..
အဖွားကြီးက ဘာကြောင့် အရမ်းကြောက်စရာကောင်းတာလဲ….သူ့သားလေးကလည်း ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲလာတာလဲ….horror ကားကြိုက်သူတွေ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျို့